/Blog/Gallery/Rojo Proviron (Mesterolone) amin'ny fambolena, fanafody, ary fitsaboana
Posted on 01 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Inona Is Raw Proviron (Mesterolone)?
Ny mesterolone roapolo dia volo kristaly, fotsy ho mavo ary tsy mahavoky amin'ny rano. Fantatra amin'ny anaran'ilay anarana hoe Proviron izany. Ny takelaka tsirairay / tabilao Proviron dia manodidina 25mg ronono mesteroloneTsy misy toy ny steroids hafa, ny mesterolone mena dia manasatra fa tsy malemy na tsy zero asa anabolic. Noho izany antony izany dia tsy miresaka an'io anabolic steroid. Tsy misy mesterolone miteraka izy io.
Schering dia nanangana Mesterolone tamin'ny 1934. Izy io dia voamarina eo amin'ny steroids tranainy indrindra ampiasain'ny Methyltestosterone sy ny Testosterone Propionate izay novolavola sy nampiasaina tamin'ny fitsaboana tao 1935 sy 1937. Ny propionate testosterone sy ny methyltestosterone dia fantatra bebe kokoa noho ny asa anaboliny matanjaka. Voaporofo fa aretina malemy kokoa i Proviron ka noho izany dia tsy nitombo ny lazany raha oharina amin'ireo steroids roa hafa.
Na dia heverina ho zava-mahadomelina taloha aza i Mesterolone (Proviron), ny toetrany tsara dia mbola miavaka hatrany. Fanafody mahomby mahakasika ny fandeferana eo amin'ny mpampiasa sy ny fiarovana. Any amin'ny sehatry ny fitsaboana, Mesterolone (1424-00-6) dia ampiasaina amin'ny fitondran-tena mahasoa amin'ny lehilahy zokiolona izay mijaly noho ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny tsiranoka androgen ambany. Iray amin'ireo fitsaboana amabolika tsara indrindra izy io.
Amin'ny fanafody, ny mesterolone (Proviron) dia ampiasaina indrindra mba hanitsiana ny tsy fahampian-tsakafo. Raha misy steroid hafa androgenic na anabolic manafoana gonadotropins endogenous mahatonga ny tsy fahampian-tsakafo, Proviron, raha ampiasaina amin'ny dosage standard dia tsy misy fiantraikany amin'ny ambaran'ny LH ao amin'ny vatana. Na izany aza, tsara raha tsy manandratra ny ambaratongan'ny LH ny Proviron tahaka ny olona sasany mino. Araka ny fikarohana, Mesterolone dia manatsara ny spermatogenesis amin'ny fitsapana amin'ny fanomezana ny androgenic effects izay ilaina amin'ity dingana ity.
Ny steroid avy amin'ny Proviron dia tsy manam-paharoa amin'ny fomba azy fa mizara toetra sasantsasany amin'ny Winstrol, Masteron ary Anavar. Ny fahendreny hendry, ny Mesterolone dia tsy ampiasaina hanatsarana ny fananganana ny mozika. Na izany aza, dia mitana andraikitra tena ilaina izy mandritra ny famoahana cycles. Ny fampiasana azy dia manan-danja kokoa amin'ny famaranana faribolana, na izany aza, ny asany dia tsy manam-paharoa amin'izao fotoana izao.
Schering dia manangana an'i Mesterolone eo ambanin'ny anarana marika, Proviron, eran-tany. Ny fivarotana mampiasa anaran-tsamirery, ohatra, Asche sy Jenepharm any Alemana dia mivarotra izany eo ambanin'ny Pluriviron sy Vistimon. Brown sy Burke any India no mivarotra izany amin'ny anarana Restore. Mampalahelo fa tsy nankasitraka ny fampidirana zava-mahadomelina tany Etazonia i Proviron
Raw Proviron (Mesterolone) Ireo toetra ara-tsimiao
Ny Mesterolone dia divergenque Dihydrotestosterone novaina tamin'ny fampidirana ny methyl group, 1-methyl-dihydrotestosterone, amin'ny 1st karbaona. Noho izany antony izany, ity zava-mahadomelina ity dia tsy mahazatra ny fizotran'ny hepatika ka azo atao am-bava. Anisan'ireo steroide anabolic amabolika, i Proviron dia iray amin'ireo tsy misy C17-alpha alkylated fa mitondra ny methyl group. Am-bava Primobolan dia tafiditra ao anatin'ny sokajy mitovy amin'ny Proviron momba ny methyl group. Ny steroids amin'ny C17-aa dia mampiseho ny fihenana bebe kokoa noho ny Proviron. Izany dia nahakasika ny lazan'i Proviron teo amin'ny fampiroboroboana fanatsarana ny bakteria.
Raha ampitahaina amin'ny testosterone, i Mesterolone dia mitondra fanombantombanana anabolic sy androgenic ny 100-150 sy 30-40. Ny tahan'ny Testosterone ao amin'ny 100 amin'ny sokajy tsirairay. Na dia misy aza ny anabolisy avo lenta kokoa, ny Mesterolone dia mampiseho asa kely anabolika fa tsy testosterone. Ny tranga mitovy amin'izany dia mankany Halotestin izay fantatra amin'ny fanombatombana avo lenta fa ambany ny asa anabolika. Ny valin'ny androgenika ao Proviron dia mampihena ny asan'ny androgenic indraindray.
Araka ny resahina etsy ambony, ity fanafody ity dia mampiseho ireo singa anabolika tsy misy dikany izay lazaina fa tandindonin'ny steroid. Tahaka ny DHT, ny fametrahana ny ray aman-dreniny, i Proviron dia rava ary metabolised amin'ny metabolites tsy mivaingana avy hatrany dia mivoaka avy hatrany avy eo ny vatan'ny muscle. Izany no antony lehibe mahatonga azy ireo tsy dia manao hetsika anabolika.
Ny enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase, izay tena mifantoka amin'ny tazomoka, mifatotra amin'ny dihydrotestosterone ary mamerina izany ho lasa koveta amin'ny zero anabolika. Ny proviron dia manjary steroid anabolic faible. Ny tsaho momba ireo mpiblaogy dia manamafy fa ny mpanome rivotra ao amin'ny Proviron sy androgen dia hita ao amin'ny tazomoka, ka mahatonga azy ireo ho malemy ny asany. Raha ny siansa, tsy izany no izy.
Mesterolone dia maneho fifandraisana tsara ho an'ny Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), proteinina iray izay mifototra amin'ny steroids anabolic, toy ny testosterone, mahatonga azy ireo tsy miasa. Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny steroids hafa anabolika i Proviron, dia manatsara ny fiantraikany sy ny fiasan'ny steroids anabolic amin'ny alalan'ity dingana ity. Amin'ny farany, ny testosterone bebe kokoa dia afaka manatanteraka ny asany ao amin'ny vatana.
Ny Proviron dia afaka mifandray amin'ny enzyme izay mampiova ny testosterone amin'ny estrogen, fantatra koa amin'ny anarana hoe aromatase enzyme. Io fihanaky ny steroid io dia manimba ny asany amin'ny fatorana amin'ny aromatase enzyme ary manakana ny vokatra hafa eo amin'ny sehatry ny estrogenic. Ny voka-dratsiny manohitra ny estrogenic dia mety tsy ho mahery vaika toy ny an'ny Aromatase Inhibitor, fa ny vokatra dia voamarika. Ny ambaratonga dia miankina amin'ny karazam-panafihana ataon'ny mpanao fambolena.
Raw Proviron (Mesterolone) mandray tombony amin'ny fanabeazana vatana (Inona no ataon'ny Proviron?)
Hahazo tombontsoa be dia be
Ny Proviron dia tsy ny steroid indrindra ampiasaina amin'ny bodybuilders mandritra izao cycles bulking. Ny sasany dia tsy hampiasa akory aza rehefa avy ny tsingerina. Na izany aza, anisan'izany i Proviron ao anaty paoziny, dia manampy ny mpandidy iray hahatratra tampoka ny teboka mihenjana mandritra ilay dingana lehibe. Ny fandrosoana dia mety manomboka mihena ary indraindray mijanona amin'ny fotoana iray mandritra ny diany ho an'ny ankamaroan'ny olona. Hahazo tombontsoa be i Proviron amin'izao fotoana izao satria manatsara ny fahafahan'ny andian-tsika hafa tafiditra ao anatin'io paozika io mba hanamafisana ny asany.
Ireo bodybuild competitors dia mampiasa dosage goavam-be amin'ny testosterone mandritra ny famoam-bolana, fa matetika, ny dosage dia ambany kokoa mandritra ity dingana ity raha ampitahaina amin'ny vanimpotoana tsy vanim-potoana. Na dia izany aza, ny mpisera sasany dia misafidy ny hametrahana fetran'ny testosterone voafetra rehefa vanin'ny vanim-potoana dia noho ny antony manokana. Mesterolone dia azo ampiasaina amin'ny tranga toy izany satria omena ny fitakiana androgen. Mety ho heverina ho tsy ilaina izany, fa tena mahasoa.
Fiatrehana ny dingana fitiliana
Raw Mesterolone no ampiasain'ny bodybuilders, mandritra ny famokarana. Mandritra io sehatra io, dia mampiseho endrika manasitrana mitovy amin'ny an'ny Masteron izy. Na izany aza, ny tombony manan-danja indrindra dia ny fahafahany manatsara ny fahatsapana mihatra amin'ny steroids hafa tafiditra ao amin'ny pao. Mampifamatotra mafy ny mpanome ny androgen i Proviron mba ahafahan'ny mpampiasa mandoro ny fatana haingana sy haingana kokoa. Raha heverina ny vokatr'izany fanoherana ny estrogenic an'i Proviron, dia hiharan'ny faharetan'ny rano ny mpampiasa, ary angamba tsy misy ilàna ny anti-estrogen nentim-paharazana ao amin'ny pila. Mampitombo ny isan'ny testosterone maimaim-poana koa i Proviron. Fanampiana be izany satria hatramin'ny ambany dia ambany ny ambany. Ny vokatra dia ho avo kokoa ho an'ny olona izay ahitana an'i Proviron rehefa ampahafantarina ambany ny tahirin-tsakafo ambany ho an'ireo mpampiasa izay tsy. Amin'ny lafiny iray, ny tombontsoa lehibe ananan'ny mesterolone mandritra ny famokarana diabeta dia ny fahaizany manatsara ny androgenicity ny steroido hafa tafiditra ao amin'ny stack miaraka amin'ny tanjon'ny fanamafisana ny physique. Effects of Proviron dosage Azo atao ihany koa ny manamarika raha toa ny mpampiasa.
Araka ny voaresaka terỳ aloha, Mesterolone (Proviron) dia endriky ny DHT. Midika izany fa ny fampiasana azy dia tsy miteraka voka-dratsiny. Raha oharina amin'ny pilina anti-estrogen hafa, ohatra, Nolvadex, Proviron na dia tsy matanjaka loatra aza, dia fihenan-tsolika mahomby kokoa. Mba hanazavana mazava tsara, manakana ny famokarana estrogen ny Proviron raha ny fanafody hafa kosa dia manafoana ilay estrogen efa nomanina ao amin'ny vatana. Ireo bodybuilders izay estrogen leferina dia tokony hampiasa ny Proviron miaraka amin'ny steroids hafa. Ny vokatry ny egônesia vokatry ny steroids hafa dia manamaivana an'i Proviron rehefa tafiditra ao amin'ny pila. Noho ny endri-tsoratr'ity anti-estrogen ity, dia ampiasaina eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ankehitriny i Proviron mba hanasitranana ny homamiadana sy ny gynecomastia.
Proviron steroid, tahaka ny hafa DHT drakitra, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny vatana. Mampiroborobo ny famarotana ny fatran-tsakitera voatahiry ao amin'ny vatana ho lasa angovo ampiasaina amin'ny asa atao isan'andro. Ho setrin'izany dia mihena ny lipididin'ny vatany. Ny fihenan'ny lipidipaipaipaona dia vokatry ny fitomboan'ny androgen amin'ny alàlan'ny fampiasana Proviron. Izany no mahatonga ny Mesterolone tena mahomby mandritra ny famoahana faribolana.
Ny fampiasana steroid dia mety ho tena manahirana indrindra indrindra raha ny mpampiasa dia mila miatrika aromatisation sy ny vokatra manaraka. Izany dia dingana izay mahatonga ny testosteron ao amin'ny vatana na izay entina amin'ny alalan'ny steroïde dia miova ho estrogen. Ny vokatra manaraka dia ahitana ny fitehirizana ny rano, ny fahazoana mavesatra, ny gynecomastia, ny fihenan'ny hormona amin'ny hafa. Estrogen koa dia manentana ny famokarana hormonina manohitra ny anabolic, fantatra amin'ny hoe cortisol.
Ny vaovao tsara dia ny tsy fisian'ny aretin-javona Proviron. Izany dia manakana ity dingana mampidi-doza ity amin'ny fifehezana ny tenany amin'ny enzyme izay mampiroborobo ny fitsaboana. Noho izany, i Proviron dia manakana ny hetsika mahery fihetsika ary dia manome fiarovana amin'ny vokatra hafa aterak'izany.
Manatsara ny asan'ny steroids hafa
Mba hahatratrarana vokatra tsara indrindra, ny bodybuilders dia mametraka steroids anabolic sy androgenic miaraka amin'ny steroid Proviron. Voalohany, araka ny voalaza tetsy aloha, dia manakana ny fiantraikany eo amin'ny sehatra estrogenic izany. Faharoa, i Proviron dia manao ny anjara asan'ny kandidà ho an'ny steroid hafa izay mahatonga azy ireo hahomby kokoa. Izany dia afaka manao izany satria mifatotra amin'ny mpanolo-tsaina androgen ao amin'ny vatana. Rehefa ela ny ela dia lasa mavitrika kokoa ny kanseran'ny steroid rehetra. Ohatra, rehefa ampiasaina miaraka amin'ny Anavar na Androlic Steroid.
Mampihena ny hormonenan'ny firaisana globulin (SHBG)
Ny hormonenan'ny firaisana globulin dia mamatotra ny testosterone eo amin'ny vatan'ny olona izay mampihena ny isan'ny testosterone maimaim-poana. Ny Proviron dia manana fifandraisana mavesa-danja amin'ny hormonina, noho izany dia mampihena izany, ka miteraka fitomboan'ny testosterone maimaim-poana. Ny testosterone maimaim-poana dia mampirisika ny fitomboan'ny tazomoka mandritra ny fitrandrahana sy famokarana. Ireo olona izay ahitana an'i Proviron ao amin'ny sehatry ny fiaramanidina dia tena hahazo vokatra tsara kokoa.
Manitsy ny tsy fahampian'ny lahy
Mesterolone 1424-00-6 dia fanafody mety ho an'ny lahy sy ny vavy. Ny ankamaroan'ny toe-javatra, io olana io dia vokatry ny fihenan'ny famokarana sira. Na dia tsy mazava tsara aza ny tsipiriany momba ny tsy fahampian'ny lahy sy ny vavy, dia azo lazaina fa miankina amin'ny gonadotrophins sy ny androgens ny famokarana sela, ohatra, testosterone. Ireo hormones ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanentanana ny taovam-pananahana. Ny Proviron, etsy ankilany, dia mandrisika ny andrèna nefa tsy misy fiantraikany amin'ny gonadotrophins. Midika izany fa manome fahafaham-po ny siramamy Proviron ny fitomboan'ny fahavokarana.
Tsara ho an'ny fanomanana ny fifaninanana
Manana namana tonga lafatra i Proviron rehefa manomana fifaninanana. Izy io dia manampy amin'ny fihazonana hery, fanatsarana ny fahitana ny mozika ary ny fihazonana ny hatavezina mandritra ny vanim-potoan'ny fiomanana. Bilaogera tsy tambo isaina no nampiasa an'i Proviron mba hikotehana sy hamenoana satria izy io dia mampitombo ny habetsaky ny androgen raha mampihena ny haavon'ny estrogen. Amin'ny farany, mahazo tombony avy amin'ny androgenic ny mpampiasa toy ny vokatra mahery vaika sy ny voka-bary matavy rehefa mihena ny fitehirizana ny rano.
Araka ny efa noresahina tetsy aloha, dia manome testosterone ny Proviron. Ho setrin'izany, ny testosterone dia manamaivana ny soritr'aretina, fantatra ihany koa, ny tsy fetezan'ny dysfunile. Mahagaga koa fa manampy ny libido; Izany antony izany ho an'ny rehetra bodybuilder mba hampidirinao ao anaty pila.
Tsy misy mesterolone injection
Ny fisainana amin'ny fampiasana ny fanjaitra amin'ny hoditra dia mety hanakivy ny mpivavaka amin'ny fampiasana steroid. Soa ihany, voatifitra i Proviron, toy izany koa ny fomba ahafahanao miala amin'ny fanaintainana. Raha toa ianao ka karazana halatra, dia tokony ho safidy anao ny Proviron raha tsy manadino ny tombontsoa hafa azony omena azy.
Tombontsoa manohitra ny famoretana
Ny iray tamin'ireo fitsapana natao tamin'ny mesterolone dia nanondro fa ity steroid ity dia mety hanatsara kokoa ny toe-batan'ny mpampiasa sasany amin'ny fahaketrahana. Izany dia nahasarika ny fampiasana ny olona mijaly amin'io toe-javatra io. Ny siansa dia tsy nahitana ny vokatra azo avy amin'ny fitsapan-kevitra, satria nisy fanamarihana toy izany koa natao tao amin'ny vondrona mpitantana ny toerana. Manana endri-tsolika avo lenta ny Proviron ka mety hampitombo ny tsy fahasalamana hormonal sy ny fanaovana firaisana ara-nofo. Aorian'izay dia manatsara ny fahatsaratsarana sy ny fahatokisana i Proviron ary manatsara ny fihetseham-po tsara sy tsara ao amin'ny bodybuilder.
Rojo Proviron (Mesterolone) Dosage
Mesterolone, Ny steroid anabolic tsara indrindra, dia ampiasaina amin'ny fomba roa samy hafa; ho an'ny tanjona ara-pitsaboana amin'ny aretina sy ny fiterahana. Maro ny tombontsoa azo avy amin'ny Proviron, saingy afaka ny hankafy ny dosie tsara. Ireo doses voatendry amin'ny tanjona tsirairay dia hodinihina etsy ambany.
Ny takelaka 25mg dia tokony haka adiny telo isan'andro hikarakarana hery sy fihenanam-behivavy. Ny dosage dia tokony ho 75mg isan'andro. Ity dosage ity dia apetraka amin'ny dingana voalohany amin'ny fitsaboana. Ny dosage dia mampihena ny takelaka 25 mg indray mandeha isan'andro miaraka amin'ny fotoana. Misy tahirin-kevitra mitovy amin'ny Proviron koa ampiasaina mba hampiharana ny tsy fahampian'ny lahy. Misy fanafody hafa ampiasaina any Proviron mba hahazoana vokatra tsara indrindra.
Ny bakteria fampiroboroboana fampiroboroboana dia mampiasa ny dosie 50mg amin'ny 150mg isan'andro. Araka ny fikarohana, ny antsasak'i Proviron dia miara-miaina eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 13 ora. Ny tanjona voalohany amin'ity dosage ity dia ny mampihena ny tahan'ny fitehirizana rano, indrindra fa noho ny estrogen. Ankoatra izany, io dosage io dia miantoka fa ny haavon'ny testosteron ao amin'ny rafi-body dia asaina manakana ny mety ho voka-dratsin'ny tsy fahampian-tsakafo aorian'ny dingana. Amin'ny ankamaroan'ny ohatra, ny olona dia hampiasa 100mg isan'andro isaky ny farafaharatsiny. Na izany aza, ny dosie 150mg sy 100mg isan'andro dia tena mahasoa amin'ny lafiny mitovy. Ny fampiasana dosie Proviron dia maharitra mandritra ny valo na 12 herinandro. Mba handresena teboka iray izay mitranga matetika amin'ny herinandro faran'ny vanim-potoana, mandritra ny enina herinandro ny Proviron dia hiasa ho an'ny majik.
Ireo mpampiasa vehivavy mandray anjara amin'ny fanatanjahan-tena matanjaka dia mampiasa an'i Proviron. Na izany aza, ny fampiasana azy amin'ny vehivavy dia tena kivy. Raha ny vehivavy dia manapa-kevitra ny hampiasa azy, dia tokony ampy ny dosage 25mg isan'andro mba hanatsarana ny fahitana ny mozika. Tsy tokony hihoatra ny efatra ka hatramin'ny dimy herinandro ilay fangatahana raha tsy izany dia hijaly noho ny fanafody ny virilizing. Tsy mety ny Proviron sy ny fitondrana vohoka. Tokony hanakana ity rongony ity ny reny mitaiza sy bebavy.
Raha mikasa amin'ny fampiasana Proviron ianao, mametraka azy amin'ny steroïde hafa dia hahatonga anao ho tsara kokoa noho ny loza. Ireo olona Mesterolone koa dia mikaroka an'i Winstrol, Androlic, Primobolan, Anavar ary Masteron, izay miasa tsara amin'ny zava-mahadomelina mandritra ny famoahana ny cycles. Izany dia mampitombo ny androgenicity amin'ny steroids ampiasaina ao amin'ny pila mba hanome ny karazana mafy. Ny mpampiasa sasany dia mety hampiditra azy ao anatin'ny tsingerim-bolo raha toa ka mahasoa azy ireo izany.
Provôtion sur overdosage
Tsy misy tatitra miverimberina momba ny voka-dratsin'ny voka-dratsin'ny voka-dratsin'ny otrikaretina ao amin'ny Proviron mandritra ny sikina na rehefa mihazakazaka amesterolone PCT. Na izany aza, ny fampiasana androna tsy manam-petra dia manara-penitra toy ny aretim-panafody, virilisma, fikorotanana ara-pahasalamana, gynecomastia, olana eo amin'ny aty, fihenana ny fandeferana glucose, ny fahasimbana amin'ny tendrom-pitabatabana, ny aretim-pivalanana, ny fitomboan'ny taovam-pandevonan-tsolika sy ny fandosiran'ny gastrointestinal. Tokony hatao amin'ny olona tsirairay ny fanombanana ny fitsaboana mba hamantarana ny fitsaboana ampiasana azy. Tokony hanana fahalalana ampy ny mpampiasa rehefa handray an'i Proviron ary ny dosage tokony horaisina mba hisorohana ny fitsaboana.
Rice Proviron (mesterolone) cycle
Rehefa mieritreritra fa tsy manana steroid anabolika i Proviron, na mety manana fomban-javatra marefo izy, dia tsy afaka mandeha bisikileta irery. Fa kosa, ampiasaina miaraka amin'ny steroids hafa anabolic, toy ny fanafody fanampiny, mba hampihenana ny fiantraikany eo amin'ny vatana. Ankoatr'izany dia tafiditra ao anaty doka iray ho an'ny voka-dratsiny manohitra ny estrogen sy ny fiantraikany amin'ny aesthetic izay manatsara ny fahasalamana mafy. Ny maha-androgen mahery koa koa dia antony iray mahatonga ny mpibolobolo ho tia azy io.
Ny bakteria malefaka sy atleta izay mampiasa an'i Proviron ho toy ny fitambaran-tsampy dia manome dosage ny 50mg amin'ny 100mg isan'andro mandritra ny vanim-potoana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy famerana ny fotoana tokony horaisina. Proviron PCT dia mety miasa ihany koa ho an'ny bodybuilders sasany. Manao izany izy ireo mba hampihenana ny haavon'ny estrogen ary hanatsara ny fahavokarana. Na dia tsy fanapahan-kevitra ratsy izany, dia misy fanafody hafa mahomby kokoa misy fiantraikany mahery vaika izay azo ampiasaina mandritra ny PCT toy ny Nolvadex. Tokony hanalavitra ny vola rehetra i Proviron raha toa ka mety hampihena ny famokarana testosteron endogenous ao amin'ny vatana.
Ireo cycles etsy ambany dia tokony hanome anao an-tsoratra ny zavatra andrasana.
Raw Proviron (mesterolone) famaranana 1
1 50mg isan'andro 40mg isan'andro
2 50mg isan'andro 40mg isan'andro
3 50mg isan'andro 40mg isan'andro
4 50mg isan'andro 40mg isan'andro
5 50mg isan'andro 40mg isan'andro
6 50mg isan'andro 40mg isan'andro
7 50mg isan'andro 40mg isan'andro
8 50mgper andro 40mg isan'andro
Raw Proviron (mesterolone) famaranana 2
1 40mg / andro 40mg / andro
2 40mg / andro 60mg / andro
3 60mg / andro 80mg / andro
4 60mg / andro 80mg / andro
5 60mg / andro 80mg / andro
Raw Proviron (mesterolone) Side Effects
Ny Proviron no steroid indrindra raha ampitahaina amin'ny steroids hafa anabolic sy androgenic. Ny bodybuilders dia afaka mampiasa ity steroid ity ary mankafy ny tombony azony raha tsy misy fiantraikany amin'ny zavatra hafa tsy azo tratrarina. Ny voka-bary vitsivitsy dia mety ho traikefa, saingy ny ambany dia ambany. Tsy manome soso-kevitra ny Proviron ho an'ny vehivavy satria avo be ny habetsaky ny virilisation taorian'ny fampiasana azy. Ny voka-dratsin'ny mesterolone no resahina etsy ambany.
Ny voka-dratsin'ny Common Proviron dia ahitana;
Mihabetsaka ny fitomboany
Hery na ambany ambany
Nitombo ny haben'ny totozy
Ny vokatry ny voankazo tsy voavolavola;
Mihamaro ny haben'ny prostaty
Ireo voka-dratsin'ny Proviron ireo dia mety ho mbola ratsy kokoa aza raha misy mesterolone maloto nohon'ny mpampiasa na mitantana dose mihoatra. Mba hisorohana an'io loza io dia tokony hahafantatra ny fotoana hahazoana ny Proviron sy ny isany ny mpampiasa.
Fitsipika, lalàna ary fitsipika momba ny steroïde dia samy hafa amin'ny faritra sy firenena. Raha ny fijerin'ny mesterolone (Proviron), raha ny siansa, ny steroid anabolika noho ny fiantraikany kely amin'ny anabolika, dia raisina ho toy ny steroide anabolika any amin'ny tany sasany izany dia ara-dalàna. Ny Proviron dia mahazatra any amin'ny firenena tandrefana; Etazonia, Royaume-Uni ary Kanada.
Any Etazonia, ny mesterolone Raw dia asongadina ho votoatin'ny 111 Schedule ao ambanin'ny Lalàna mifehy ny tsiranoka. Amin'ity tranga ity, tsy ara-dalàna ny manana na mampiasa an'i Proviron ao amin'ity faritra ity. Ny fampidirana, ny fividianana na ny fanondranana olona an-tsokosoko anabolika, ny Proviron tafiditra, dia heverina ho heloka bevava.
Ao amin'ny United Kingdom (Angletera), i Proviron dia heverina ho zava-mahadomelina IV. Ny fisamborana sy ny fampiasana ny Proviron ho an'ny filan'ny tena manokana dia ara-dalàna eto amin'ity firenena ity. Ny fampidirana ity steroid ity ihany koa dia tsy heloka ho an'ny olom-pirenena UK.
Any Canada, Proviron dia voarakitra ao amin'ny Fandaharam-potoana IV, toy ny any Angletera. Midika fotsiny izany fa ara-dalàna ny fananana sy ny fividianana ity vondrona ity. Ny fandraràna an'i Proviron dia voarara ary heverina ho heloka bevava. Ireo izay nahazo ny fanondranana an-tsokosoko an'i Proviron dia nandoa lamandy $ 1000 sy / na sazy an-tranomaizina enim-bolana ho an'ny heloka voalohany. Ireo izay nanao ny heloka bevava manaraka dia mandoa sazy an-tranomaizina 2000 sy / na iray taona an-tranomaizina. Ireo fitsipika ireo dia voalaza ao amin'ny Lalàna momba ny zava-mahadomelina Kanadianina (CDSA).
Mesterolone mivarotra an-tserasera
Ny fomba tsotra sy mora indrindra hividianana proviron dia amin'ny Internet araka ny ankamaroan'ny mpampiasa. Hividy anao bebe kokoa ny fividianana avy amin'ireo mpivarotra ao an-toerana. Maro ny mpivarotra gym tsy mitondra ny zava-mahadomelina na tsy manana azy. Ny ankamaroan'ny mpamatsy aterineto dia manana Proviron na endriny maro be. Ny faharesen-dahatra amin'ny fanjohian-tserasera anaty aterineto dia ambony indrindra raha mikaroka marika mampihomehy ianao. Na izany aza, tsy tokony ho izany no mitranga raha manao fanamarinam-panazavana vitsivitsy amin'ny mpamatsy anao ianao. Amin'ny ankabeazan'ny lalàna Schering Proviron eo amin'ny tsena, tsy misy antony tokony hividianana marika generic.
Ny fividianana ny Proviron an-tserasera dia mety ho toy ny fomba tsotra indrindra hahazoana ny zava-mahadomelina, saingy misy ny loza mety hitranga. Satria Proviron dia zava-mahadomelina III ao Etazonia, ny fividianana izany an-tserasera dia handika ny lalàna. Manaraka izany ny fanasaziana mavesatra na fanagadrana. Ny mpampiasa dia afaka mividy an'io zava-mahadomelina ara-dalàna io raha tsy misy ordinatera. Izay ny prescription dia tsy maintsy ankatoavina ara-medaly, manamafy ary fantatry ny governemanta. Ny firenena sasany dia manana lalàna mitovy, na dia somary mafy aza ny lalàna any Etazonia. Ny firenena hafa dia mendri-piderana fa tena henjana sy manohitra amin'ny fivarotana anabolic anabolic. Tahaka an'i Proviron no steroid anabolic safidy, ny FDA dia tsy nametraka ny fampiasana azy any Etazonia.
Ahoana no hividianana Proviron
Ny Proviron dia tsy mihanaka loatra eo amin'ny tsena raha ampitahaina amin'ny fanampiana hafa, steroids anabolic na ny vovoka. Na izany aza, dia heverina ho toy ny fitambaran-javatra ilaina izy io izay tokony ho mora foana amin'ny tsena. Ny betsaka indrindra amin'ny mesterolone mena dia novokarin'i Schering pharmaceuticals. Noho ny natiora sy ny rafitry ny Proviron dia sarotra ny mamokatra lahatsary. Tsy midika izany fa tsy tokony hitandrina tsara ny mpampiasa rehefa mividy. Tsy ny rehetra Proviron for sale Ny adiresy dia tokony hatokisana.
Ankoatra ny vokatra novokarin'ny orinasa pharmaceutika, dia misy ireo natao avy amin'ny laboratoara ambanin'ny tany. Ireo laboratoara ambanin'ny tany dia tsy nahazo alalana, nijery na nahazo alalana. Raha fehezina, dia miasa tsy ara-dalàna izy ireo. Proviron SARM dia iray amin'ireo fitaovana novokarin'ny laboratoara ambanin'ny tany izay fantatry ny maro. Ny laboratoara ambanin'ny tany ambany kokoa dia tsy manamboatra ity fitambarana ity satria tsy dia mahazatra loatra izany. Mifidy kosa izy ireo hamoaka ny steroids sy ancillaires hafa malaza hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny Proviron dia tsy dia lafo loatra, ary amin'ny lafiny iray, mety ho mora foana izany. Ny fividianana avy amin'ny orinasa pharmaceutika dia lafo lavitra noho ny fividianana azy avy amin'ny mpamatsy tany ambanin'ny tany. Ity anefa dia ny trangan'ny labozia (UGL) rehetra any ambanin'ny tany mifanohitra amin'ny fanafody fanafody. Ohatra, i Schering dia mivarotra 25mg Proviron amin'ny $ 0.83; Ny orinasa hafa pharmaceutical dia mivarotra izany amin'ny $ 0.75. Underground lab (UGL); Amin'ny ankilany kosa dia mivarotra 25mg Proviron ho an'ny $ 0.50.also, ny laboratoara ambanin'ny tany dia mety manamboatra proviron amin'ny fifandraisana hafa tahaka ny 100mg, 50mg, 25mg na i 20mg. Ny hatsaran'ireo zavatra vita amina ambanin'ny tany dia mety mampiahiahy ka mampitaha ny vidin'ny fanafody fanafody dia tsy lojika.
Ny fitadiavana famatsiana azo itokisana izay mivarotra legioma Proviron dia mety ho asa sarotra indraindray. Proviron ny mivarotra na mesterolone mba hamidy ireo adverts dia manerana ny aterineto. Ny mpampiasa dia tsy tokony hividy vokatra tsy misy fanaovana fanaraha-maso an-tserasera ny mpamatsy. Na izany aza dia afaka mividy an'i Proviron mora foana amin'ny aterineto ianao. Ao amin'ny Steroid.com, manolotra anabolika ara-dalàna isika izay mahazo legal ary tsy misy ordinatera. Ny vidinay dia mety ary mifanaraka amin'ny kalitaon'ny vokatray. Hahatsiaro ho maivamaivana ianao rehefa mividy Proviron avy amintsika rehefa manao raharaham-barotra sy ara-dalàna isika. Ireo olona Mesterolone koa dia mikaroka ireo steroid hafa anabolic, izay omenay ara-dalàna.
Fanamarihana momba an'i Proviron
Ny Proviron dia mety tsy ho mahery vaika toy ny steroids anabolic hafa, fa ny tombotsoany dia hita amin'ny faran'ny vanim-potoana. Efa nampiasa izany aho nandritra ireo faribolan'ny famokarana ary tamin'ny fanomanana ny fifaninanana. Hatreto aloha ny zava-drehetra dia tsara, tsy misy fitarainana. Talohan'ny nahitako ity steroid ity dia nanana olana tamin'ny testosterone nivoahako tao amin'ny vatako aho ary nila nanao dingana goavambe ho an'ny testosteron endogenous. Ankehitriny dia efa nampiditra ny Proviron Bayer tao amin'ny paoziko aho, ampiasaiko kely fotsiny ny testosterone endogenous ary indraindray tsy misy. Tiako ilay zava-mitranga fa ity steroid ity dia manampy ahy hihazona ny hozatry ny leo mitombo ao anatin'ny famoizam-bolo. Na dia maro aza ny bodybuilders tsy miraharaha ny vokatr'izany, dia tsy azoko atao ny manakana azy tsy hiditra ao amin'ny piraofiliko. Ity steroid ity dia tsara kokoa noho ireo SARM hafa efa nampiasako taloha. Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy miatrika aretina mahery vaika aho indray mandeha. Ny fahatsapako sy ny fahatsapana ny fahasambarana dia nanatsara tanteraka.
Inona no atao amin'ny proviron? Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa proviron (1424-00-6) dia steroid. Angamba satria tsy azon'izy ireo ny hormonina na tsy mampiasa amin'ny fomba mety, dia mety tsy hahita fiovana mahagaga avy hatrany ianao mandalo ity steroid ity, saingy ny vokany dia miadana nefa azo antoka; indrindra rehefa amin'ny famoahana cycles. Tsy manam-paharoa sy manokana izy io satria ny mpampiasa dia tsy miteraka zava-manan'aina mahatsiravina amin'ny fampiasana steroid hafa anabolic. Ny nahazoan'ny tompon-trano (Proviron) ara-dalàna tsy misy ordinatera dia azo atao ihany koa. Ireo mpividy dia afaka mahazo izany ao amin'ny Steroid.com amin'ny vidin'ny pocket friendly.
1 alpha-mythyl-17 beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-iray
Formulaire scientifique scientifique: C2OH3202
Ny lanjan'ny molecule Proviron: 304.4716
Mpanamboatra pharmaceutika: Schering
Ny tebiteby mivalona: Tsy azo ampiasaina
Proviron antsasak'adiny: 12-13 ora
Dokam-barotra: 25mgs amin'ny 200mgs isan'andro
Faharetan'ny fotoana: dimy ka hatramin'ny enina herinandro
AJ, SL, & AA, OA (2009). Mesterolone (Proviron) dia miteraka kalitao siramamy amin'ny fihenan'ny taova hormonina momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny mason'ny lehilahy adala Sprague Dawley ratis testis. Fikarohana sy fikarohana siantifika, 4(4), 320-327.
Casquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, & de Oliveira, HCF (2017). Fihetseham-po mahatsiravina ny CETP sy ny mesterolone fitsaboana ny fanatanterahana tombony amin'ny fampiasana lipoproteins Plasma Profile: Studies in tissue transgenic. Lipids, 52(12), 981-990.
Top Benefits Winstrol 15 Izay Ilainao Fantatra Alohan'ny Buy Winstrol Online Rao Isotretinoin (Accutane) ho an'ny akne: Fikarakarana ny akne miaraka amin'ny Isotretinoina